ပိုင်ဆိုင်တာတွေ ရောင်းပြီး ကားတစ်စီး အိမ်တစ်လုံးနဲ့ နေရာအနှံ့ လျှောက်သွားတဲ့ လင်မယား | PTH
Home / Travel / ပိုင်ဆိုင်တာတွေ ရောင်းပြီး ကားတစ်စီး အိမ်တစ်လုံးနဲ့ နေရာအနှံ့ လျှောက်သွားတဲ့ လင်မယား
INCREDIBLE images have revealed the stunning tiny house, which can lay claim to being the most travelled with more than 45k miles on the clock. The 130-square-foot house is on wheels which enabled owners Alexis Stephens (33) and Christian Parsons (42) of Tiny House Expedition to travel across 36 US states, one Canadian province and more than 17 tiny home communities. Striking pictures show the couple posing outside their beautiful home, hauling their tiny home down the road and relaxing with friends. The couple met in Winston-Salem, North Carolina, USA where they also built their house. They explained what led them down this path. Tiny House Expedition / mediadrumworld.com
ပိုင်ဆိုင်တာတွေ ရောင်းပြီး ကားတစ်စီး အိမ်တစ်လုံးနဲ့ နေရာအနှံ့ လျှောက်သွားတဲ့ လင်မယား
February 17, 2018	867 Views
ကနေဒါနိုင်ငံမှ အဲလက်နှင့် ခရစ္စတိန် တို့ လင်မယားဟာ ပိုင်ဆိုင်တာတွေကို ရောင်းပြီး သေးငယ်သော အိမ်ကို ဘီးတပ်ကာ ကားနဲ့တွဲပြီး နေရာအနှံ့ကို လျှောက်လည်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၃၀ စတုရန်းပေသာ ရှိတဲ့ အိမ်လေးပေါ်မှာသာ နေပြီး စွန့်စွန့်စားစား ခရီးတွေ သွားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခုဆိုရင် သူတို့ဟာ ၂ နှစ်ကျော်ကြာပြီ ဖြစ်ပြီး ကနေဒါနဲ့ အမေရိကန် တစ်ဝိုက် နေရာစုံအောင် လျှောက်လည်ခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိုင်ပေါင်း ၄၅,၀၀၀ ရောက်ရင် သူတို့ရဲ့ ခရီးစဉ်ကို ရပ်နားမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ သေးငယ်တဲ့ အိမ်လေးကတော့ ပစ္စည်းတွေ စုံလင်စွာ ရှိပြီး ကမ္ဘာပတ်တဲ့ သူတို့အတွက်ကတော့ ကတယ့်ကို အသုံးဝင်တဲ့ အိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်။
Previous တစ်နှစ်အတွင်း အလေးချိန် ၇၅ ကီလိုဂရမ်လျှော့ပြီးနောက် ချစ်သူ ရှာဖို့ ကြိုပမ်းလာတဲ့ ဟီနန်ဒေသ အ၀ဆုံးလူသား
Next တောင်ကိုရီးယား မိန်းကလေးနဲ့ ချစ်သူဖြစ်သွားတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား အမျိုးသား
ဂျပန်နှင့် စင်္ကာပူဟာ ကမ္ဘာ့ သြဇာအကြီးဆုံး ပတ်စပို့ အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပြီး မြန်မာ ပတ်စပို့က အဆင့် ၉၄ မှာ ရှိနေ
ဖန်ပေါင်းချောင်လို အဆောက်အဦးမှာတည်းပြီး တစ်ညကို မြန်မာငွေ ၄ သိန်းလောက်ကျသင့်မယ့် ဟိုတယ်
ခရီးပုံမှန် သွားခြင်းဟာ ဦးနှောက်နဲ့ နှလုံးကျန်းမာရေး အတွက် ကောင်းမွန်
တစ်မြို့လုံး သမင်တွေ ပြည့်နေပြီး အလည်လာသူများကို ဆွဲဆောင်စေတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက နာရာမြို့
တစ်မြို့လုံးမှာ လမ်းပေါ်မှာ သမင်တွေ ပြည့်နေခြင်းဟာ ခရီးသွား ဧည့်သည်တွေကို ဆွဲဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဂျပန်နိုငံက နာရာမြို့မှာ ဖြစ်ပြီး သမင်တွေနဲ့ စည်ကားရာ မြို့လေးလည်း …